के हो इन्साइडर ट्रेडिङ, कस्तो छ कारवाहीको कठघरामा उभ्याउने प्रावधान ?
काठमाडौं : भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) लाई पुँजी बजारको एक कुप्रथाको रुपमा परिभाषित गरिएको पाइन्छ । जसमा कुनै पनि कम्पनीको महत्वपूर्ण भित्री सूचना तथा जानकारीमा पहुँच भएका व्यक्तिहरुले उक्त सूचना र जानकारीलाई आफ्नो हितमा प्रयोग गर्दै सेयर कारोबार गर्दछन् । इन्साइडर ट्रेडिङ सामान्य अर्थमा कुनै पनि कम्पनीले धितोपत्र मूल्यमा सीधा प्रभाव पार्ने सूचना आमलगानीकर्ता माझ सार्वजनिक गर्नुभन्दा अगावै त्यस्ता सूचना थाहा पाएर गरिने कारोबार भन्ने बुझिन्छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले इन्साइडर ट्रेडिङलाई यसरी परिभाषित गरेको छ : धितोपत्र सम्बन्धी ऐन नियमको व्यवस्था बमोजिम लगानीकर्ताहरु समक्ष सार्वजनिक गराउनुपर्ने जानकारी एवं सूचना सार्वजनिक नगरी उक्त जानकारी एवं सूचनाका आधारमा कम्पनीसँग सम्बन्धित व्यक्ति वा निजको नजिकको व्यक्तिले धितोपत्र कारोवार गरेमा यस प्रकारको कारोबारलाई धितोपत्रको भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) भनिन्छ ।
यस प्रकारको कारोबार गर्न धितोपत्र सम्बन्धी ऐन नियमले बन्देज गरेको छ । इन्साइडर ट्रेडिङमा कम्पनीका अध्यक्षसहित सञ्चालकहरु, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, प्रमुख लेखा अधिकृत तथा व्यवस्थापनको उच्च तहमा रहेका कर्मचारीहरु, लेखा परीक्षक लगायतको संलग्नता हुने सम्भावना उच्च हुन्छ ।
यता, धितोपत्र सम्बन्धी ऐन–२०६३ ले पनि भित्री करोबारको परिभाषा गर्दै यस्तो संलग्न हुनेलाई के कस्तो कारवाही गर्ने पनि स्पष्ट पारेको छ । ऐनको दाफा ९१ उपदफा १ मा भित्री कारोबारका बारेमा यस्तो परिभाषा गरिएको छ : कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक नभएका धितोपत्रको मूल्यमा असर पार्न सक्ने भित्री सूचना वा जानकारीहरुका आधारमा आफूले धितोपत्र कारोबार गरेमा वा अरुलाई धितोपत्र कारोबार गर्न लगाएमा वा आफूलाई थाहा भएको सूचना वा जानकारी आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा बाहेक अरु कसैलाई दिएमा त्यस्तो व्यक्तिले धितोपत्रको भित्री कारोबार गरेको मानिने छ ।
साथै, उक्त परिभाषाको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ : यस उपदफाको प्रयोजनका लागि ‘भित्री सूचना वा जानकारी’ भन्नाले कुनै धितोपत्र जारी गर्ने संगठित संस्थाबाट सार्वजनिक नभएको कुनै खास किसिमको सूचना वा जानकारी सर्वजनिक भएमा त्यस्तो धितोपत्रको मूल्यमा असर पर्न सक्ने किसिमका सूचना वा जानकारी सम्झनुपर्छ ।
भित्री कारोबार गर्नेलाई के छ कारवाहीको कानुनी व्यवस्था ?
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन–२०६३ को दफा १०१ मा भित्री कारोबार गर्नेलाई दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको छ । यसको उपदफा १ मा भनिएको छ : दफा ९१ बमोजिम भित्री कारोबार गर्नेलाई भित्री कारोबार गरेको ठहरेमा बिगो बमोजिम जरिवाना वा १ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।
यद्दपि, २०७६ भदौमा धितोपत्र ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश गरिएको थियो । जसमा भित्री कारोबार गर्नेलाई कारवाहीका थप कडा प्रावधानहरु प्रस्ताव भएको थियो । उक्त विधेयकमा मूल ऐनको दफा १०१ को उपदफा १ लाई संशोधन गरी बिगो खुलेकोमा बिगो भराई बिगो बमोजिमको जरिवाना वा ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । र, बिगो नखुलेमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय बनाउने प्रस्ताव भएको थियो । तर उक्त विधेयक अनुसार ऐन संशोधन भने अहिलेसम्म भएको छैन ।
नेपालमा पनि बेलाबखत इन्साइडर ट्रेडिङका घटनाहरु बाहिर आउने गरेका छन् । हालै मात्र पनि अजोड इन्सुरेन्सको हकप्रद सम्बन्धी सूचनालाई आधार बनाएर इन्साइडर ट्रेडिङ भएको विषय चर्चामा आएको छ । तथापि, यसमा छानबिन गरेर वास्तविकता भने बाहिर आउनै बाँकी छ ।
अहिलेसम्म आंशका मात्र व्यक्त गरिएको हो । साथै, चर्चामा नआउँदा इन्साइडर भएको छैन भन्ने मान्न पनि सकिँदैन । यसलाई पूर्णतय बन्द गर्न नसकिए पनि न्यूनीकरणका उपायहरु भने तयार गर्न सकिन्छ । यसका लागि नियामक निकाय तथा सूचीकृत कम्पनी दुवैको सहकार्य हुन आवश्यक देखिन्छ । नियामकले शंकास्पद कम्पनीको बजारमा कारोबार गतिविधिलाई नियमन गर्न सक्छ ।
साथै, इन्साइडर ट्रेडिङ सम्बन्धी लगानीकर्ताको गुनासोलाई पनि नियामकले उचित छानबिन गर्न जरुरी देखिन्छ । कतिपय देशमा कम्पनीहरुले इन्साइडर ट्रेडिङलाई रोक्न ब्ल्याक आउट पिरियड राख्ने गरेका छन् । जुन समयमा कम्पनीका निर्णयसँग प्रत्यक्ष पहुँच राख्ने अधिकारीहरुलाई सेयर खरिदबिक्री गर्न रोक लगाइन्छ ।